प्रेरक प्रसंग : मै मात्रै बाठो नभन्नुहोस् ! — Motivatenews.Com
प्रेरक प्रसंग : मै मात्रै बाठो नभन्नुहोस् !
काठमाडौं – धनी, सम्पन्न व्यक्तिले कहिल्यै पनि आफुलाई धनी भन्न चाँहदैनन्, आफ्नो धनलाई लुकाउन चाहन्छ । शिक्षित व्यक्तिले कहिल्यै पनि आफ्नो शिक्षाको घमण्ड गर्न चाँहदैन, सबैको सामु नम्र र झुक्न चाहान्छ । फलेको फल कहिल्यै पनि ठाडो हुदैन त्यो पनि झुक्नै चाहान्छ । ती सबै कुराहरु जुन हाम्रो स्वभाव बाटै झुक्न चाहन्छन् । तिनीहरु सबै वास्तविक बाठा र मुल्यवान ठानिन्छन् ।
असफल व्यक्तिको प्रवृति छुट्टयाउने सबै भन्दा सजिलो तरिका पनि त्यहि नै हो । जो सबैभन्दा पिडित छ उसैले ठुला–ठुला गफ गरि आफ्नो पिडितपनलाई शान्त बनाउँदछ । जो असफल र वर्वादको जीवनतीर धकेलिदै छ उ नानाथरीबाट आफलाई माथि पार्न चाहान्छ र दिन प्रतिदिन दलदलमा भासिएको मान्छे जस्तै बर्वाद हुदै जान्छ । यस्ता व्यक्तिले गाडिले स्टार्ट बन्द हुने बेलामा झन ठुलो आवाज र धुवाँ फाले झै आफ्नो शेखी मात्र बजार्छन र । अर्कालाई बजार्न खोज्दा आफै बजारिन्छन् ।
एक पटक एउटा असफल अर्थात् शेखी बजार्ने व्यक्तिले केकको व्यापार शुरु ग¥यो । जानी नजानी केकको तयारि गर्दथ्यो र त्यसलाई तौल गरेर विभिन्न मुल्यमा बेच्ने गर्दथ्यो । कोहि सिधा आए भने कम तौल गरेर बेच्दथ्यो । म जस्तो बाठो कोेहि छैन भन्ने गर्दथ्यो । व्यापार गर्ने क्रममा उसले अर्काे व्यक्तिसँग क्रिम पनि खरिद गर्ने गर्दथ्यो । उसले नजिकैको क्रिम स्टोरबाट क्रिम ल्याउँथ्यो । आफूले केकको विक्रि गर्दा प्रायः कम तौलिने र ठगेर विक्रि गर्ने गर्दथ्यो । त्यसैले उसले क्रिम स्टोरबाट ल्याएको क्रिम पनि कम छ कि भनेर तौलियो । तौल गर्दा एक पाउ कम भयो । त्यसपछि उसले मै मात्र बाठो छु भन्ने सोचेर कम तौल भएको क्रिमको बारेमा अदालतमा उजुरी ग¥यो । उसले भन्यो – मैले केक बनाउन लामो समयदेखि क्रिम स्टोरबाट क्रिम ल्याँए तर सधै कम तौल भएको हुदा त्यसको क्षतिपुर्ती र त्यो स्टोरको मालीकलाई दण्ड सजायको माग ग¥यो ।
अदालतले दुवै पक्षलाई बोलायो । क्रिम स्टोरको मालीकलाई अदालतले बयान सुनाउन भन्यो । त्यसपछि क्रिम स्टोरको मालीकले बडो नम्र हुँदै हात जोडेर भन्यो हजुर, हो मैले दिएको क्रिमको तौल वहाँले जति कम छ भन्नुभयो त्यो ठिकै हो तर मैले पनि सधै उहाँको पसलबाटै केक खरिद गर्थे । जब उहाँले एक केजी माग्नु हुन्थ्यो त्यसपछि मैले उहाँले मलाई बिक्रि गरेको एक केजीसँग बराबर हुनेगरि उहाँलाई दिन्थे । मेरो तौल ठिक त्यति नै हुन्थ्यो जति तौल उहाँले मलाई दिनुहुन्थ्यो । यति भन्दै अघिल्लो दिन किनेको केकको प्याकेट पनि अदालत सामु देखायो, त्यहाँ केक जोखियो । तौल अत्याधिक कम पाईयो त्यसपछि अदालतले त्यहि उजुरि गर्ने व्यापारि अर्थात् मै मात्र बाठो छु भन्नेलाई दण्ड सजाय र पुरै क्षतिपुर्ती तिराउने सर्तमा ५ बर्षको लागि कैदमा पठाउनु भनि आदेश दियो ।
अतः मित्र, आज मान्छे मै मात्रै बाठो छु भन्ने गर्छ । साच्चै बाठो हुनलाई बुद्धि र जुक्ति चाहिन्छ । बाख्राको पाठो चरासँग खेल्न खोजेर हुँदैन किनभने चराको नजिकै पाठो जाँदा चरा उडिहाल्छ । चरासँग खेल्न चराकै बुद्धि चाहिन्छ । अर्कालाई दोष देखाएर आफु माथि पर्न खोज्दा झन तलतिर जाने कुरा निश्चित छ । ढिलै भएपनि आफ्नै गतिमा विनम्र भावले गरेको प्रत्येक काम सफल हुन्छ । तर द्रुत गतिमा काम गर्छु र सफल हुन्छु भन्ने सोच राख्नेहरुलाई तलतिर खस्न पनि द्रुत नै हुन्छ ।